သူများအကြောင်းလဲ မပြောတတ်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » သူများအကြောင်းလဲ မပြောတတ်ပါ
Posted by မောင် ပေ on Oct 16, 2011 in Health & Fitness, Think Different | 27 comments
ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသလိုပါပဲ ၊ သူများအကြောင်းလဲ မပြောချင်ပါဘူး ခင်ဗျာ ။ မပြောတတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ ။ မပြောတာ အကောင်းဆုံးမို့ မပြောတာပါ ခင်ဗျား ။
သို့ ပေသည့် ၊ ယခုပို့ စ်တွင်တော့ သူများအကြောင်း မဟုတ်တဲ့ ၊အများ အကြောင်း နဲနဲပြောပြချင်ပါတယ် ခင်ဗျား ။
ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် အတိအကျ ရေးပြချင်သော်လည်း ၊ ခက်တာက ကိုယ်က အတိအကျ မသိ ။
ရှေးဦးစွာ မြန်မာလူမျိုးတို့ အလှူအကြောင်းကို နဲနဲပြောချင်ပါတယ် ။
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အလှူဒါန ပြုလုပ်ရာမှ လက်မနှေးကြဘူး ဆိုတာ မြန်မာတိုင်း သိကြပါတယ် ။
အလှူလုပ်ပြီ ဆိုလျှင် လည်း ကိုယ်တတ်နိုင်လျှင် တတ်နိုင်သလို ၊အလှူလာ ဧည့်ပရိသတ်များကို ကောင်းပေ့ ဆိုသည့် အစားအသောက်များဖြင့် တည့်ခင်းဧည့်ခံကြပါသည် ။
အလှူလာ ရပ်နီးရပ်ဝေး ဧည့်ပရိသတ်ကြီးများကလည်း အလှူ့ ရှင် သဒ္ဓါမြောက်အောင် အလှူရှင် တည်ခင်းသည်များကို အားပါးတရ စားသောက်ကြပါသည် ။
မန်းတလေးမြို့ အမရပူရမြို့ နယ် ရှိ အလှူကြီး တစ်ခုတွင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည် ။
အလှူရှင် က နတ်သုဒ္ဓါ နှင့် ရေခဲမုန့် တို့ ဖြင့် အလှူလာ များ ကို ဧည့်ခံပါသည် ။ ရပ်နီးရပ်ဝေး မကျန်ပေါ့ ။
စားသောက်လို့ အပြီး မှာ စတွေ့ ကြတာပဲဗျာ ။ အလှူက စားသောက်ပြန်လာခဲ့သူတိုင်း ဝမ်းတွေ လျှောကုန်ကြပါသတဲ့ ။ ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်းတွေ ပြေးကြရတာပေါ့ ။
အိုဘာတဲ့လဲ ဆိုရင် ၊ အစာ အဆိပ်သင့်တာပါတဲ့ ခင်ဗျာ ။
အလှူရှင့် ခဗျာ လည်း ဘယ်စိတ်ကောင်းမလဲ ၊ ကိုယ့်အလှူမှာ ကျွေးတဲ့ဟာကနေ ဖြစ်ရတာဆိုတော့ ။
ဒီသတင်းကို ကြားရတဲ့ စာဖတ်သူ ကျွန်တော် က ဘယ်လို စဉ်းစားမိသလဲ ဆိုရင် ၊ အလှူရှင် ကျွေးတဲ့ အစားအသောက်ကြောင့် ဖြစ်တာ ဆိုတော့က..
အလှူရှင် သည် ကိုယ့်အလှူလာသူ ကို သည်လို ဖြစ်ပါစေ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ တော့ ၊ ဘေးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အစားအသောက်ကို ကျွေးမှာ မဟုတ် ။
ကောင်းပြီ..ဒါဆိုရင်..အစားအသောက်တာဝန်ခံ ၊ နတ်သုဒ္ဓါ နှင့် ရေခဲမုန့် ကျွေးတာ ဆိုတော့ ၊ နတ်သုဒ္ဓါ ကြောင့်သော်လည်းကောင်း ၊
ရေခဲမုန့် ကြောင့်သော် လည်းကောင်း ဖြစ်ရမည် ။ သောက်သုံးသော ရေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည် ။
ကောင်းပြီ ဒါဆိုရင် ၊ သောက်ရေသန့် ၊ နတ်သုဒ္ဓါ လုပ်သူနဲ့ ရေခဲမုန့် လုပ်သူ တို့ ဟာ ၊ လူအများကြီး အတွက် ချက်ပြုတ်စီစဉ်ရတဲ့ ကိစ္စ ကို အဘယ်ကြောင့် ဂရုမစိုက်ရသနည်း ဟု..
ကျွန်တော် စဉ်းစားမိသည် ။ အစားအသောက် လုပ်သူများသည် အလကား လာလုပ်ပေးခြင်း မဟုတ် ။
သူတို့ စိတ်ကြိုက်ဈေးသတ်မှတ်ယူပြီးပါပြီ ဆိုမှ ၊ သူတို့ အစားအသောက် ကို အရသာရှိရုံသာမက ၊ သန့် ရှင်းဘေးကင်းရမည် ဟု အာမ မခံ နိုင်ပါလား ဟု ။
သူတို့ အခကြေးငွေယူ ချက်ပြုတ်စီစဉ်သော အစားအသောက်ကို စားမည့်သူကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်သည့် သဘောလား ၊ သို့ မဟုတ်…
သူတို့ ချက်ပြုတ်စီစဉ်သော အစားအသောက် ကို စီစဉ်ရာတွင် မသန့် ရှင်းသော ၊ မလတ်ဆတ်သော အဖိုးနည်း ကုန်စိမ်း၊စားသောက်ကုန်များကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့်လား ဟု ။
ဂျာနယ် အချို့ တွင် ဤအလှူမှ စားသောက်ပြီး ဝမ်းလျှောခြင်း ဖြစ်ကြကြောင်း သတင်းကို ထည့်သွင်းရေးကြသည်ကို ဖတ်ရပါသည် ။
အဆိုပါ သတင်းတွင် အလှူရှင့် အမည် ကို ထည့်သွင်း မဖော်ပြထား ။ ထား…. ။ ဒါကတော့ အရေးမကြီး ။
ဘယ်က သောက်ရေသန့် ၊ ဘယ်ဆိုင်က တာဝန်ယူ ချက်တဲ့ နတ်သုဒ္ဓါ ၊ ဘယ်ဆိုင်က ပြုလုပ်တဲ့ ရေခဲမုန့်ဖြစ်ပါသည် ဆိုတာကိုတော့ ထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြပေးလျှင် မကောင်းပေဘူးလား ဟု တွေးမိသည် ။
မန်းတလေး မြို့ တွင် ဖြစ်ပွားသော ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု အကြောင်းအရာ မို့မန်းတလေး သားပီပီ စဉ်းစားမိခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအသား အနေနှင့် ဆိုလျှင် လည်း စဉ်းစားရဦးမည် ဖြစ်ပါသည် ။
အရပ်သား တစ်ယောက်လို တွေးလျှင်တော့ ၊ အဲဒီ သောက်ရေသန့် ၊ နတ်သုဒ္ဓါ ဆိုင် နဲ့ ရေခဲမုန့် ဆိုင်ရှင်တွေက သူတို့ ဆိုင်နာမည် တွေကို သတင်းထဲ ထည့်မရေးအောင် ကြိုပိတ်လိုက်ပြီနေမှာ ဟု ။ အကယ်၍ ဆိုင်နာမည် များ နှင့် တကွ ဖော်ပြလာခဲ့လျှင် ၊ မန်းတလေး မြို့ ရှိ စားသုံးသူများ ၊ အလှူလုပ်မည့်သူများ အနေဖြင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ဖြစ်သွားနိုင်သည် မဟုတ်ပါလော ။
မည်သို့ ပင် ဖြစ်စေ ၊ အစားအသောက် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့်၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအပေါ်ကိုယ် အသေးစိတ် ဂရုမစိုက်သည်ကိုမူ ယခု ဖြစ်ရပ်က မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီ ဖြစ်သည် ။
ထိုကဲ့သို့ သော အစားအသောက်လုပ်ငန်းရှင်များ မန်းတလေး မြို့ တွင် ဘယ်လောက် ရှိနေပြီလဲ ။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း တွင်လည်း ဘယ်လောက် ရှိနေပြီလဲ ဆိုတာ…..
“ ပန်းသတင်း လေညှင်းဆောင် ၊ လူသတင်း လူချင်းဆောင် ” နေသော အိုင်တီခေတ် ၊ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာသာသာ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ..
ကောင်းသောလုပ်ရပ်ကို လည်း ကောင်းချီးပေးရမည် ဖြစ်သလို ၊ မကောင်းဘူး ဟု ဆိုလျှင် လည်း ကောင်းလာစေရန် ဆင်ခြင်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းသတိပေးကြရမည် ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလား ။
——————————— အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်———————————
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည်သူတွေနစ်နာခဲ့တာကြာနေပြီဗျာ သက်ဆိုင်ရာကလည်း ပိုပြီးကြပ်ကြပ်မတ်မတ်ကိုင်သင့်ကြပါပြီ ဒီကိစ္စက အမျိုးသားကျန်းမာရေးပါ ။ ကျွန်တော်က ဟင်းကို ကိုယ့်ဘာသာဝယ်ချက်တဲ့လူဆိုတော့ တွေ့နေရတယ် ဆိုးဆေးဆိုတာကလည်း ဘယ်လောက်ပြောနေပြောနေ ကျုပ်တို့ရှောင်လို့မလွတ်အောင်တွေ့နေရတာပဲသေချာကွင်းဆင်းပြီးလုပ်ကြပါလား ။ အခုတောင်ကျုပ်တို့ အဲလိုစားလာရတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ကိုယ့်ဘာသာ ချက်စားတာမဟုတ်ဘဲ ဆိုင်မှာဝယ်စားတဲ့လူတွေက ပိုသနားဖို့ကောင်းတောင်ကောင်းတယ် ဆိုင်မှာချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေ ရဲဗလောင်းခတ်နေတာကလည်း အကောင်းမမှတ်ကြနဲ့ဗျာ…..
မောင်ပေရ ကြိုပိတ်ထားလဲ ပေါ်မှာပါဘဲ။
နောက်တစ်ချက်က အလှူအတွက်ဆို ဘယ်အချိန်ကတည်းက ထချက်ထားတာလဲမှမသိတာ။
အဲတော့ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင် ဒါတစ်ခုထဲကြောင့်လို့ပြောရခက်သွားတယ်လေ။
ဟုတ်တယ်၊ လူ(၅၀၀)လောက် လာစားကြတာဆို။အမရပူရ မြို့ နယ် ကျန်တန်းရပ်က လူတွေကတော့
သိကြမှာပေါ့ ကိုဝင်းထောလခါရေ။ ကျန်တန်းရပ် ပွဲတော်ရပ်ကွက်က လို့ Venus News Journal မှာပါတယ်။
အန်ဖတ်တွေ ကို ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသတ်မယ်တဲ့နော်။
ဗမာပြည်ရဲ့မုန့်ပဲသားရည်စာတွေဆိုးဆေးတို့မပုပ်ဆေး(preservative)များထည့်တာ standard တခုရှိလားမသိဘူး?
accident ပေါ့ဗျာ။ အလှူရှင်ရော ဧည့်သည်ပါဒုက္ခရောက်ကြရတာပါ။ ခုလိုmedia တွေအားကောင်းလာတဲ့ခေတ်မှာ သတင်းထွက်လာတာမှန်ပေမဲ့ ဒိလိုကိစ္စမျိုးက မြန်ပြည်တလွှားတောရွာတွေမှာ ထူးပေမဲ့ မဆန်းတဲ့ ကိစ္စတွေပါနော်။ food-poisoning်from fair and ; slaughter house and foodhandler inspection ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာဟာ ဆရာဝန်လောင်းများ နဲ့ အခြေခံကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းလောင်းများရဲ့ သင်ခန်းစာတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ သင်ကြားမှုတွေပါ။ သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်ဝန်ထမ်းများကိုလည်းဒီလိုသင်တန်းတွေပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ခက်တာက ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် မဆောင်ရွက်ကြသလို…လူထုကလည်းဒီကိစ္စကို အရေးကြီးတယ်လို့မသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါဘူး။
်food safety standard နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးဦးစီဌာန ရဲ့ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကြီကြပ်ကွပ်ကဲရေးဌာနကနေ တိကျတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ ဥပဒေကို ကောင်းကောင်း enforce ၏။ ဒါမှမဟုတ်ကွက်ကြားမိုးရွာလို့လဲဖြစ်မှာပေါ့။
အဲဒီသတင်းလေးကတော့ ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားတယ်နော် … ဖတ်မိလိုက်ပါတယ် … ကြားပြီး စိတ်တောင်မကောင်းဘူး … အလှူရှင်ကတော့ စေတနာနဲ့ အလှုလုပ်ပေမယ့် … အလှူသွားစားလို့ ဖြစ်ရတာလို့ပဲ ပြောပြောနေကြတာ သိပ်တော့မဟုတ်ဘူးလေ … ။
နောက်ဆုံး လက်သည် တရားခံက ဘယ်သူတဲ့လဲဗျ။
အဲဒါ စိတ်ဝင်စားနေတာ။ အလှူရှင်ကတော့ စေတနာပေါက်ပြီး လှူတာ
ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုဖြစ်စေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အစားအသောက်
လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ယောက်မှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုရင်
ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
b/c people are selfish
ကိုပေရေ၊ ဘယ်လို အဖြေလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားနေ စောင့်နေမယ်ဗျို့။
ကျွန်မတို့အလုပ်ထဲမှာ တစ်ခါဖြစ်ဖူးတာက စုပေါင်းကထိန်အလှူမှာ ကတ်ကြေးကိုက်ကျွေးတာ … ၀န်ထမ်းအားလုံးနီးပါး ၀မ်းလျှောကုန်လို့ စက်ရုံဆရာဝန်တစ်ယောက် တစ်အိမ်တက်ဆင်း လိုက်ကုပေးလိုက်ရတာ နောက်ပိုင်း ကတ်ကြေးကိုက်မြင်ရင်တောင် လန့်နေရောပဲ …
“ဒို့လက်ကလွတ် ဗြွတ် “..အလှူမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုတာ..
လှူတယ်ဆိုတိုင်း… ကိုယ်ကကုသိုလ်ရပြီးရော…. သူများဘာဖြစ်ဖြစ် မလုပ်ရဘူးဆိုတာပေါ့..။
အလှူရှင်က တာဝန်အရှိဆုံးလို့ ထင်တာပါပဲ..။
တကယ်လို့ လူသေရင်.. လူသေမှုနဲ့… ထောင်ထဲအရင်ဆုံးထည့်ရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီနေ့ မနက် သံတွေ၊သတ္တုတွေ နဲ့ မီးဖို လုပ်တဲ့
အသေးစားစက်မှု လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးနဲ့ 
ရေခဲမုန့် လုပ်တယ် ဆိုတာက ကုန်ကြမ်းတွေ ကို ရေသန့် နဲ့ ရောပြီးရင် မီးနဲ့ အရင်ကျို ရပါသေးတယ် တဲ့ ၊ သို့ မှသာ ဝမ်းလျှောတာ၊အန်တာ၊အဆိပ်သင့်ခြင်း လုံးဝ မဖြစ်မှာပါတဲ့ ။
ကုန်ကြမ်း ကို ရေသန့် နဲ့ ရော၊ကျိုပြီးမှ ရေခဲမုန့် လုပ်တဲ့သူ ဆိုလို့“ပွိုင့်” ဆိုတဲ့
လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ကို ပဲ သူ သိရပါသတဲ့ ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ အဲဒီ “ပွိုင့်” အတွက် ၊ ကျိုဖို့ စတိန်းလက်စတီး အိုးကြီးကို သူကိုယ်တိုင် ကျကျနန လုပ်ပေးခဲ့ရတာမို့ ပါပဲ တဲ့ ။
အဲဒီ “ပွိုင့်” လုပ်ငန်းရှင်ဟာ လည်း အခြားသော လုပ်ငန်းများဖြင့် မနိုင်မနင်းနဲ့ မို့ ယခု ရေခဲမုန့် လုပ်မရောင်းတော့ပါဘူး တဲ့ဗျာ ။
ကျွန်တော် မောင်ပေ လဲ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် ။ “ ဝမ်းနည်းပါ၏ ” လို့ 
ဟုတ်တယ်လေ..ဘေးကင်းစွာနဲ့ စားရမယ့် ရေခဲမုန့် အမျိုးအစားကို သိပြီးမှ ၊ မစားရလို့ ပါ
အဲ့ဒီ အဖြစ်ပျက်က ကျွန်တော်တို့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေ ဆေးခန်းထိုင်တဲ့ အမရပူရမြို့ ပွဲတော်ကျောင်းတိုက် ကျနန်းကျေးရွာ အလှူမှာ ဖြစ်သွားတာပါ… အဲ့ဒီ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အမရသုခ ဆိုတဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းလေး ရှိပါတယ်… စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့ တွေဆိုရင် ဆေးခန်းဖွင့်ပါတယ် … အဲ့နေ့က လူ အယောက် ၄၀၀ လောက်ဖြစ်သွားပါတယ်… အသေပျောက် မရှိပါဘူး စားပီး နာရီဝက် တစ်နာရီ လောက် မှာ ၀မ်းသွားတဲ့သူနဲ့ အော့အန်တဲ့သူနဲ့ တစ်ယောက်ပီး တစ်ယောက် ပဲ … အမရပူရ ဆေးရုံကလည်း မနိုင်တော့ဘူး… မန်းလေး ဆေးရုံကြီး လွှဲပေးရပါတယ် …. တစ်မြို့ လုံးမှာ ရှိသမျှ စိတ်တသုခ၊ ချမ်းမြသုခ အစရှိတဲ့.. နာရေးကားတွေ အကုန် အလုပ်ရှုပ်ကုန်တော့တာပဲ… ရှိသမျှ ဆလိုင်း ပုလင်းတွေ၊ ဓါတ်ဆားတွေလဲ အကုန်ပါပဲ… ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းကတော့ တာရှည်ခံအောင် ယမ်းစိမ်း အထည့်များသွားလို့ လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ အခုထိ စမ်းသပ်ဆဲလို့ ပြောပါတယ်… ၂၃ ရက်နေ့လောက်ကျရင် အတိကျ သိရမှာပါ … အလှူ့ရှင်တွေ တာဝန်ရှိသူတွေ မေးမြန်းမှူ့တွေလုပ်နေပါတယ်… တရားစွဲဖို့ ကိစတွေ ခနလောက် ဖယ်ထားကြပါဦးဗျာ..
အဲ့နေ့က ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လူနာတွေရဲ့ မြင်ကွင်းကို အခုထိ မျက်စိထဲက မထွက်သေးဘူး…
ဒီလိုဖြစ်တဲ့မြို့မှာဆိုရင်တော့ အလှူတွေ လုပ်လည်း စားရဲမယ့်သူ သိပ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်နော်။ ဒါကလည်း အကြောင်းတိုက်ဆိုက်လို့ဖြစ်တာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ ဘယ်ဟာမှာ ပြဿနာရှိလည်းဆိုတာ စစ်တမ်းကောက်ရင်လည်း တစ်ခုချင်းစီ လိုက်သုတေသနလုပ်မှ အဖြေမှန်ထွက်မှာပေါ့။ ဒီလို လူအများစားပြီး ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်း အလှူရှင်လည်း အလှူလုပ်ပြီး အလှူမမြောက်သလိုများ ခံစားနေမိမှာလား။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ဟာကြောင့် ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာ အလှူရှင်အနေနဲ့ တာဝန်အရှိဆုံးမို့ စစ်ဆေးလေ့လာသင့်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။
မောင်ပေ ဒီကိစ္စဒီတိုင်းကြည်နေလို့ မဖြစ်ခြေဘူး
ရွာသူရွာသား အများက တရားခံကိုစိတ်ဝင်စားနေကြလေရဲ
အလှူ့ရှင်နေရာက ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ရင် တော်တော် ၀မ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ် ဘယ်သူမဆို ကိုယ့် အလှူ့မှာ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးဆိုတာပဲ ကျွေးချင်ကြမှာပါ… နောက်ပီး… ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်း ကြိုမသိရတော့ ခက်မှာ၊ ကိုယ်ကတော့ အကောင်းဆုံး အသန့်ရှင်းဆုံး ဆိုတဲ့ အနေထားကနေ ရွေးချယ်လိုက်ပေမယ့် ဖြစ်ချင်တဲ့ အခါမှာ (အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်) ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာ… အလှူ့ ရှင်ကို တကယ်ပဲ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်….
ဟုတ်တယ်ကိုပေရေ ဆိုင်နံမည်တွေပါ ထည့်ရေးသင့်တယ် ကုသိုလ်ရချင်ပါတယ် အခုတော့ အလှူရှင်ခဗျာ အကုသိုလ် ရသလိုဖြစ်နေပြီ
အလှူရှင်အတွက် စိတ်မကောင်းသလို ဝေဒနာခံစားရသုတွေအတွက်လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး
ကိုယ်ကတော့ အလှုတွေ..မှာ….. သိပ်သွားမစား ဖူးဘူး။
ဒီလို မျိုး ဖြစ်ရပ်က အလှူ မှာ..မှ ဖြစ်ရတာ ဆိုတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
ဆ၇ာတော်ဦးဇောတိက ရဲ့ စကားလေး ကို သတိရပါတယ် ။
ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ဟာ..ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး စိတ်ထားနဲ့အကောင်းဆုံး အရည်အချင်းကို..ဖော်ပြနေတာပဲ..ဖြစ်ရမယ်…တဲ့။
ကိုယ်တို့ အားလုံး ကြိုးစားဖို့ လိုနေပါပြီ။
ပေရေ….. နင်ကောလွတ်ရဲ့လား ? ကိုယ်ကတော့ အလှူလာတဲ့သူတွေ ရဲ့ ပကာသနစကားရှောင်တဲ့ အနေနဲ့ သွားခဲတယ်….။ ဖိတ်မဲ့သူလည်းနဲပါတယ်…။
မောင်ပေ တစ်ယောက် ကတော့
ကျန်းကျန်းမာမာ ၊ ချမ်းတာ့ မချမ်းသာ သေးဘူး ဗျ
ဂေဇက် မှာ နေ့ စဉ် ဝင်ရောက် စာဖတ် ၊ အကြောင်းအရာရရင် စာရေး ရင်း
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေလျှက် ရှိကြောင်းပါ ဘိုနီ ခင်ဗျား
ကျနော်သိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင် အလှူရှင်နဲ့ ရော ဆိုင်တွေနဲ့ ရောသိပ်မဆိုင်ဘူးဗျ။အဲဒီအလှူလုပ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက သုံးတဲ့ ရေတွင်းထဲကို ဟိုတစ်လောကမိုးကြီးလို့ ကျန်တဲ့ ရေတွင်းကရေတွေစိမ့် ဝင်ထားတယ်။အဲ့ ရေကိုသုံးမိတာကြောင့် လို့ ပြောတာပဲဟုတ်မဟုတ်တော့သေချာမသိပါ။
အရပ်သတင်း တစ်ခုတော့ သိရတယ်ဗျ ၊ အစားအစာတွေ ချက်တဲ့ အိုးကြီး ပြဿနာ ဖြစ်တယ်ပြောနေကြပါတယ် ၊
ဒီအလှုမတိုင်ခင် ဆိုးဆေးတွေ ချက်တယ်တဲ့၊ ပီးတော့ အိုးတွေကို စင်ကြယ်အောင်ဆေးပါတယ် တဲ့၊
စင်အောင်ဆေးပေ မဲ့ ဒန် သတ္တု ထဲမှာ စိမ့်ဝင်နေတဲ့ ဆိုးဆေးတွေရဲ့ အစားအစာထဲကို ၀င်ရောက်ပျံ့နှံ့ မှု ကြောင့် လို့
ထင်ကြေးပေးနေကြောင်း သိရပါတယ် ၊ ဒါလဲ ကောလဟာသ ဖြစ်နိုင်မလားပဲ ။
အစားအသောက်ပြင်ဆင်တဲ့သူတွေ တစ်ခါသုံးလက်အိတ်သုံးဖို့ ထိထိရောက်ရောက် ပညာပေးချိန်တန်ပါပြီ။
တစ်ခါသုံးလက်အိတ် အခု၅၀ပါတစ်ထုပ်မှ ၄၀၀ဘဲရှိပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အစားအသောက်ရောင်းတဲ့သူတွေ မသုံးရင် ဒဏ်ရိုက်တာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်က ရန်ကုန်မှာ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ခေါငးစည်းနဲ့ လက်အိတ်တွေ သုံးတာတွေ့လိုက်ရပြီး နောက်တော့ဒုံရင်းပြန်ရောက်သွားပါတယ်။